Kuwa ka Badbaaday 'Maalinta Dhimashada' Soo Noqda 'Habeenkii Dhimashada Nool II'
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Kuwa ka Badbaaday 'Maalinta Dhimashada' Soo Noqda 'Habeenkii Dhimashada Nool II'
Cajiib. Tani waa mid dhab ah oo cajiib ah in la soo sheego. Waxaa soo baxday in sheekada dadkii ka badbaaday ay ka timid George Romero's Maalinta dhimashada wali ma dhamaan Shalay, sawir iyo shaashad gaagaaban ayaa soo baxday oo waxaan ku sigteen inaan lumino maskaxdeenii habaarneyd. Waxay u egtahay inaan helno taxane Maalinta dhimashada cinwaankeedu yahay Habeenkii Noolaha dhintay II.
Teaser wuxuu muujinayaa seddexda xiddig ee dhiigu daboolan yahay diyaarna u ah dagaalka mid walibana wuxuu hayaa xaalad dagaal oo la yaqaan. Soo koobitaanka taxanaha ayaa sheegaya in kuwa badbaaday ay guri ka sameysan doonaan jasiirad. Taasi waa macno, tan iyo markii ay ku riyoodeen riyooyin waaweyn oo ku saabsan samaynta jasiirad bilaash ah. Waxaa intaa sii dheer, waxay umuuqdaan inay sifiican ula qabsadeen deegaanadooda cusub iyagoo tixgelinaya qoyan shaatigooda Hawaiian oo runtii qabow.
Lori Cardille, Terry Alexander, iyo Jarlath Conroy ayaa dhammaantood ku soo laabtay midkan. Looma baahna dib-u-aqbalid midkan.
Agaasime, Marcus Slabine wuxuu la wareegayaa qoraa iyo agaasime arinkaan runtiina wuxuu aad ugu faraxsanyahay baraha bulshada inuu sharaf u leeyahay inuu hogaamiyo seddexdan.
Weli ma jiro taariikh rasmi ah oo lagu sii daynayo Habeenkii Noolaha dhintay II, laakiin indhaha ayaan ka ilaalin doonnaa wixii horumar ah ee soo kordha.
Maxaad u maleyneysaa ragga ku saabsan trailer? Miyaad horeyba ugu faraxday inaad aragto Maalinta Dhimashada asalka ee shaashadda dib loogu tuuray? Noo soo sheeg qaybta faallooyinka.
Halloween 1-5 ayaa u imanaya cajaladaha 4K UHD ee Qaylada! Warshad. Halkan ka akhriso.
maalinta dhimashadaGeorge RomeroJarlath ConroyLori CardilleMarcus Slabinehabeenkii dhimashada nool IITerry AlexanderZombies
Quentin Dupieux's 'Mandibles' Trailer wuxuu ku saabsan yahay Duulimaad weyn oo Laba Guys ay ka heleen jirkooda
Wadada 'Baqdinta Cabsida: Qeybta 2 1978' Clip wuxuu dib u dhigaa Slasher Dib ugu noqoshada Xerada Xagaaga